सुशान्त घटनामा अब जे’ल जाने पालो अंकिताको ! रियाले यस्तो आरोप लगाउँदै अंकिता विरुद्ध मु’द्दा – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /International/सुशान्त घटनामा अब जे’ल जाने पालो अंकिताको ! रियाले यस्तो आरोप लगाउँदै अंकिता विरुद्ध मु’द्दा
एजेन्सी । सुशान्त सिंह राजुपतको विषयसंगै जोडिएको ड्र’ग्स मामलामा नार्कोटिक ब्यूरोले रिया चक्रवर्तिलाई ८ सेप्टेम्बरमा गिरफ्तार गरेको थियो । उनलाई केही हप्ताअघि मात्रै बम्बई हाई कोर्टले जमानातमा छाड्ने आदेश दिएसंगै उनी रिहा भएकी हुन् । रिया झण्डै १ महिनासम्म न्यायीक हिरासतमा रहेकी थिईन् ।
रिया जमातनमा बाहिरीएसंगै उनका वकिल सतिश मानेसिन्धेले भनेका थिए कि,‘जस्ले पनि रियाको अपमान गरेका थिए उनीहरुवि’रु’द्ध कानूनी कारवाही गर्ने छौं र मानहानीको मु’द्या दर्ता गर्ने छौं ।’ सोही बमोजिम खबर बाहिरीएको छ कि सुशान्त सिंह राजपुतकी पूर्व प्रेमिका अकिंता लोखण्डेकोवि’रु’द्धमा रियाले मानहानीको मु’द्या दर्ता गर्नेछिन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
खबरका अनुसार रियाले अकिंताकोवि’रु’द्धमा कानूनी कार्वाही गर्नकोलागी पुरै तयारी गरि सकेकी छन् । भारतीय मिडिया ई टाईमस्को रिर्पोट अनुसार रियाले अकिंताकोवि’रद्धमा मु’द्या दर्ता गर्नेछिन् । किनभने अकिंताले रिया चक्रवर्तिको आलोचना गर्ने क्रममा भनेकी थिईन् कि‘के कोही व्यक्ति जो कसैलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्ने दावा गरिरहेको हुन्छ त्यो व्यक्तिले उस्लाई ड्र’ग्स सेवन गर्ने अनुमति दिन्छ ?’
अकिंताको यही बयानका आधारमा सुशान्त सिंह राजपुतको केसमा नयाँ विबाद शुरु भएको थियो । रिर्पोटका अनुसार जब रिया गि’र’फ्तार भईन् सोही समयमा अकिंताले रियालाई कटाक्ष हान्दै एउटा पोष्ट शेयर गरेकी थिईन् । जस्मा लेखिएको थियो,‘भाग्य र सहयोगबाट केही हुँदैन । तपाईँ आफ्नो कर्मद्धारा नै आफ्नो भाग्य आफै बनाउनु हुन्छ । र त्यो कर्म हो ।’ यसका साथै अकिंताले लेखेकि छन्,‘सुशान्तको मेन्टल हेल्थको बारेमा उनको परिवारलाई किन जानकारी गराईएन ? किनभने रिया आफैले ड्र’ग्सको सेवन गर्ने गर्थिन् ।’
अकिंताको यिनै बयान र सोसल मिडियामा गरेका यिनै पोष्टका आधारमा रियाले उनकोवि’रु’द्धमा मानहानीको मु’द्या दर्ता गराउने तयारी गरेकी हुन् । यो कुराको आधिकारीक धारणा भने न रिया न त उनका वकिलद्धारा नै सार्वजनिक भएको छ । तर जे होस् यदि साँच्चै यस्तो भयो भने कस्तो हुन्छ होला त अकिंता र उनका फ्यानहरुको रियाक्सन रु त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ ।
बलिउडका कलाकारभन्दा बढी कमाई गर्छन् कपिल शर्मा, कति छ सम्पत्ति ?